ငါဗီတာမင်ရှုပ်ထွေးတာ, အရက်မသောက်ရနိုင်သလား? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
А тем более, если витамины утром или в обед, то к вечеру они усвоятся. Так даже лекарства назначают которые нельзя одновременно принимать — одно утром, другое вечером.
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဗီတာမင်ကပဋိဇီဝဆေးမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ကြဘူးအရက်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပမာဏခန္ဓာကိုယ်ဝင်ကွဲပြားအတွက်နေ့စဉ်ဗီတာမင်ကိုစားကြလော့။ တစ်ဦးကဗီတာမင်ရှုပ်ထွေးကွဲပြားခြားနားသော vitaminok နှင့်အာဟာရပြည့်၏ကြီးမားသောထိုးပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်မသောက်ရနှင့်ကျန်းမာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျမတတျနိုငျ။ ဓာတုဗီတာမင်အရက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်စတင်လျှင်, အကျိုးဆက်များခန့်မှန်းရခက်ပေလိမ့်မည်။ တချို့ကဗီတာမင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအခြားသူတွေကိုယ်ခန္ဓာ၏တွေလည်းထိခိုက်နစ်နာစေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်, အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ငြိမ်း။
ဗီတာမင်များအသုံးပြုမှုမှာလိုအပ်သောအရက်၏ပြီးပြည့်စုံဖျက်သိမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။ နံနက်ဗီတာမင်သောက်, နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညဦးယံ၌အရက်လောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးအရက်အဖျော်ယမကာဖယ်ထုတ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင်လက်ခံသည်ပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခန့်မှန်းဖို့အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။
အဖျက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးသောအခါပဋိဇီဝဆေးနှင့်အရက်မည်မဟုတ်ယူပြီးပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် viatminnoe အကျိုးသက်ရောက်မှုသုညလျှော့ချလိမ့်မည်! သငျသညျကိုမသောက်ရှေ့မှာစဉ်းစား, ဒီဗီတာမင်ရှိပါလိမ့်မည်အဓိပ္ပာယ် ...
ဗီတာမင်ရှုပ်ထွေးသောဖို့မတိုင်းညွှန်ကြားချက်ဟာ prima ဗီတာမင်၏အချိန်မှာအရက်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
သို့သော်ကိုယ်က vitaminchiki အားဖြင့်အရက်ရဲ့စီစဉ်ထားအသုံးပြုမှုကိုငြင်းဆန်သည့်အခါတစ်နေ့တာအတွက်ပိုကောင်းမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ သင်ကတုံ့ပြန်မှုကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည်အရာကိုသိဘူး။ အဆုံးမှာတော့တနေ့လွဲချော် prima ဗီတာမင်တက်ဖမ်းပြီးတော့လွန်းကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာဖြစ်နိုင်နှင့်ပင်လိုအပ်ပေသည်။ မည်သည့်အမှု၌, အရက်၏ immoderate အသုံးပြုမှုမှာသောကြောင့်, နှင့်ဇီဝြဖစ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဗီတာမင်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာမြန်နှုန်းနှင့်အတူပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။ , မဂ္ဂနီဆီယမ်, panangina, piracetam နှင့် riboksina မှတပါး, ကြီးမားတဲ့အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၏ဆေးများနှင့်ဗီတာမင် B ကဆက်ပြောသည်ရသောမူးရူး droppers မှထို့ကြောင့်, လမ်းဖြင့်, အရက်ဆုတ်ခွာ
ဗီတာမင်နှင့်အတူအရက်ကိုမသောက်မှသာအရက်အကျိုးရှိသောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်၏မစင်ကိုအားပေးအားမြှောက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့် snizhaetsya.Vse ဗီတာမင်၏ကလေးမွေးစားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့လျင်မြန်စွာသူတို့ကို restore လိမ့်မယ်။
သငျသညျဗီတာမင်နှင့်စီစဉ်ထားသည့်ညဦးယံအချိန်အားလပ်သောရေကိုသောက်လိုလျှင်, တစ်ကြိမ်ထိခိုက်မှုမဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်, ဗီတာမင်အများအားဖြင့်အမှုများမှာတစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအတိုင်းအတာနှင့်တစ်ဦးအားပျော့သက်ရှိများအတွက်ထောက်ခံမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာဝတ်ပြုကြလော့။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အသုံးပြုပုံဗီတာမင်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမရှိကြပေ။
ကနျြးမာရေးကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာကိုဗီတာမင်သနည်း, အရက်မဆိုအမှု၌ကိုမသောက်သင့်တယ်, ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက်အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, ငါကသောက်ဗီတာမင်, ဤအချိန်ကာလအတွင်းအရက်မှရှောင်ကြဉ်လာသောအခါထိုအချိန်ကကျန်းမာရေးနှင့်မသောက်အရက်စမ်းသပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးထင် !
27 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,405 စက္ကန့်ကျော် Generate ။